Ọ bụla oge kemgbe obi mgbawa hapụrụ ihunanya ịhụta oge n'ụlọ ọgwụ mgbaka, dịka nwa onye agbata obi ọ bụla. Na-akọwa na mgbawa obi na-enweghị isi na-ewere akụkụ ọzọ n'aka Daria Bignardi. N'ihi na ọ bụ maka ịwepụ nhụsianya ka ha na-ahapụ na ịnọ jụụ n'ihu eluigwe na ala nke na-adaba na mberede na mmadụ gbahapụrụ n'aka ya.
Ọ bụ onye chere channeled na ụdị òkè akara aka. Onye nwere ike chere na ịdị arọ nke na-eche na ịdị mfe nke ịdị adị na-ere ọnụ na otu mkpụrụ obi. Okwu ahụ kwụsịrị nke ọma, ọ kpalitere ya n'enweghị ihe ngọpụ maka ya. Ma ihe kachasị njọ bụ na ndụ na-aga n'ihu, na-agbanwe site na ise ruo na mbụ, na-ebelata ihe niile n'okpuru mmetụta na ikekwe mmadụ agaghị anwụ ma ọ ga-awagharị site na ịdị adị maka puku afọ nke mgbu.
N'ihe ngosi ahụ nke resilience, sublimation ma ọ bụ euphemism nke ịchọrọ itinye taa ka ị na-ahapụ ndị na-emerụ ahụ ma rie ọnyá gị mgbe mmekọrịta na-adaghị adaba, nkata a na-eme ka anyị kwenye na ihe niile na-eme, ntu ahụ na-ewepụta ntu ọzọ, ọ bụ ezie na ikekwe agaghịkwa adị. site na ihunanya ohuru maka obi gbajiri agbaji na oku...
Ebe ọ bụ na di ya, Doug, hapụrụ ya na mberede na enweghị nkọwa, Galla na-etinye ụbọchị ya n'elu ihe ndina, na-ele anya na magnolia na patio, na-eche echiche banyere ụdị echiche dị iche iche banyere ihe ọ chọrọ iji ndụ ya mee na inwe obi amamikpe banyere ihe. o mere.mere.
N'oge njem solo mbụ ya, na Munich, ọ na-achọpụta ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke ụlọ ebe a na-egosipụta ọrụ onye na-ese ihe Gabriele Münter. Ihe osise ya "jupụtara na agba na enweghị ọṅụ" na-emegharị ya anya. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, olu Gabriele na-abanye na ndụ Galla: ọ na-ata ya ahụhụ ma na-akwa ya emo ka ọ na-akọ akụkọ ogologo ịhụnanya ya na Kandinski, dị ka Galla na Doug.
Akwụkwọ akụkọ a na-apụghị ịgbagha agbagha, mgbe ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ ma na-enwe mmasị mgbe nile, nke na-ejikọta ìhè na ịdị omimi, amara na ịdị nro, mgbe anyị na-enyocha mmekọrịta anyị na ihe mgbu, nke, n'ime ala, bụ mmekọrịta anyị na onwe anyị.
Ị nwere ike zụta ugbu a «Blue Sky», nke Daria Bignardi, ebe a:
Tags Daria Bignardi, Novelties na akwụkwọ akụkọ, Akwụkwọ akụkọ dị egwu